Ka dib AMISOM: Maxay qaadanaysaa si loo sugo amaanka Soomaaliya? - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Ka dib AMISOM: Maxay qaadanaysaa si loo sugo amaanka Soomaaliya?
Ka dib AMISOM: Maxay qaadanaysaa si loo sugo amaanka Soomaaliya?
Mar labaad, xukuumadda Soomaaliya iyo la-hawlgalayaasheeda caalamiga ah ayaa isku dayaya in ay hirgaliyaan kala-guurka. Waqtigan, yoolka ayaa ah in la bedelo mas’uuliyadda amniga dalka ee Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), oo markii ugu horreysay lagu aasaasay 2007, ciidamo maxalli ah.
Qorshaha ku-meelgaarka ah ayaa la isku afgartay sanadka 2018-ka. Marxaladda ugu horreysa waxay ku lug leedahay saddex ujeedo waaweyn. Mid ka mid ah howlgalladaas – oo loo wareejiyay maamulka garoonka Stadium Muqdisho ee ciidamada AMISOM – ayaa la gaaray. Laakiin labada kale ee kale – hubinta safarka ugu weyn ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhaba, iyo qabashada magaalada Istaraatiijiga ah ee Leego – wali waa shaqeeyaa.
Xakameynta xakameynta AMISOM, oo la dagaallamaysay kooxda xagjirka ah ee al-Shabaab 11-kii sano ee la soo dhaafay, ma ahaan doonto mid degdeg ah ama fudud. Haddii aan heshiis nabadeed la gaarin, waxay u badan tahay inay qaadato qiyaastii tobaneeyo sano, taageerayaashu waa inay diyaariyaan si waafaqsan.
Ugu dambeyntii, kala-guurka Soomaaliya wuxuu ku lug lahaan doonaa afar arrimood oo waaweyn.
Al-Shabaab labadii sanno ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo wanaagsan. Kooxdu waxay xakamaysay maareynta meelaha muhiimka ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dagaalyahaniintooda ayaa sii waday in ay isku dhafaan dadka maxalliga ah, iyagoo si sahlan u dhaqdhaqaaqa kuna biiraya ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. Waxay abuurtay ilo dhaqaale oo ku filan. Waxaana ay sii waday weerarrada sare ee weerarrada bartilmaameedyada Soomaaliya iyo AMISOM.
Intii u dhaxaysey Oktoobar 2017 iyo Abriil 2018, al-Shabaab ayaa sheegatay 418 weeraro, oo ay ku jiraan weerarrada millatari, IED hoobiyeyaasha, weerarro lagu qaado kolonyada, weerarrada is-miidaaminta, iyo dilalka. In ka badan kala badh ayaa lagu bartilmaameedsaday Ciidanka Qaranka Soomaaliya (SNA) iyo maleeshiyada raacsan. Wax yar oo ka badan rubuc ka mid ah ayaa lagu beegsaday AMISOM.
Al-Shabaab waxa ay sii kordhisay dagaalkii dagaalkii dhowaan sababtoo ah AMISOM iyo SNA waxay si weyn u yareeyeen howlgalladeeda weerarrada. Tan iyo sannadkii 2016-ka, waxaa keliya oo gacan ka helaya ciidamada AMISOM iyo qaar ka mid ah cutubyada loo yaqaan “Danabs” ee Soomaaliya. Tan iyo sannadkii 2017, waxaa jirey konton ama ka badan Mareykanka oo ay weerareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo ciidamada gaarka ah.
Hawlgalladan ayaa ku riyaaqay guulo farsamo ah, laakiin ma aysan ku filneyn in lagu dhejiyo isku dheelitirka istaraatiijiga ah ee gobolka oo dhan ama joojin al-Shabaab saamaynta ku leh dadka deegaanka. Xitaa Muqdisho, kooxdu wali waxay awood u leedahay in ay shaqeyso oo ay lacag ka qaadato ganacsiyada maxalliga ah.
2. Xoojinta ciidamada ammaanka ee Soomaaliya
Rikoodhkii ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa isku dhafanaa. Dhinaca kale, waxaa jiray horumaro horumarineed oo ku yimid horumarinta ciidamada booliska ee federaalka iyo heerarka dowlad goboleedyada. Tani waa muhiim sababtoo ah inta badan hanjabaadaha gudaha ee soo foodsaari doona Soomaaliya waxay u baahan doonaan sharci fulin halkii ay ka qaadan lahaayeen habka militariga loo hogaaminayo
Dhinaca kale, SNA weli si degdeg ah ayaan u diyaarin, marka laga reebo cutubyada Danab. Qiimeyn la sameeyay dhammaadkii 2017 ayaa lagu soo gabagabeeyay in ciidanka ay aad u liidato heer kasta oo muhiim ah oo ka imanaya taliska iyo xakamaynta, sahayda, qalabka, kaabayaasha, iyo niyadsamida. Waxaa la xoojiyay xitaa musuqmaasuq ka dhex jira qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo sarkaal sare.
SNA waxay wali tahay ciidan qaran oo magac leh. Waa wax aan awoodin in la sameeyo hawlgallo joogto ah oo ka dhan ah al-Shabaab, waxaana si joogta ah looga arkaa dad degaan aad u badan oo la tacaalayay xadgudub iyo baadi goobka askarta.
3. Dib ushaandheynta Amisom
Qorshaha kala-guurka ee Soomaaliya wuxuu u baahan yahay AMISOM inay dib-u-habayn ku sameyso. Sida aan faahfaahin ugu qoro buuggan cusub, tani maahan markii ugu horeysay ee ciidanku sidan u sameeyaan. Ururka Midawga Afrika (AU) iyo qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha caalamiga ah ayaa dhowaan soo qiimeeyay awooda AMISOM iyo qaabeynta dejinta si ay u caawiso go’aaminta kaalinteeda cusub. Hadda waxay kor u kacday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo AU si ay u go’aansadaan wadada hore.
Dhibaatada aasaasiga ah ee AMISOM waa in loola jeedo in ay noqoto hawlgal lagaga hortago, hase yeeshee si fiican looma qorshayn. Ciidamadeeda waa la kiciyay. Waxay ka maqan tahay xoogagga weerarrada mobile-ka. Taasna kuma mashquulin bulshooyinka maxalliga ah sababtoo ah caqabadaha luqadda iyo sababtoo ah ilaaliyayaashu waxay noqdeen kuwo khatar ah.
Maanta, hawlaha ugu muhiimsan ee AMISOM waa in ay noqdaan kuwo: in la ilaaliyo ciidamada al-Shabaab ee ka baxsan xarumaha muhiimka ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya; Xaqiijinta safarrada ugu muhiimsan ee u dhaxeeya deegaannadaas; oo hoggaaminta kooxdu dib ugu soo celiso difaaca. Laakiin waxay wajahaysaa caqabado dhowr ah.
Mid ka mid ah kuwan ayaa ka dhaadhicinaya wadamada ay ka qeybgalayaan ciidamada Burundi, Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Uganda – in ay sii wadaan hawlgallada khatarta ah ee khatar galinaya khasaare weyn. Tani waa inkastoo xaqiiqda ah in AMISOM ay horayba u qaadday dhaawacyo culus oo ilaalinaya ciidamadooda xoogga koraya iyo in ay u socdaan wadooyin aan ammaan ahayn. Dhibaato labaad ayaa ah in xitaa ay ku jirto rabitaan siyaasadeed oo ku filan, qaybaha khaaska ah iyo hantida looga baahan yahay in lagu burburiyo awooda dagaal ee ugu weyn ee al-Shabaab ayaa ah mid gaaban oo ka dhexjirta howlgallada ciidammada milateriga ah iyo guud ahaan Afrika.
Marka laga tago qaybtiisa militariga, ayaa 700 oo askari oo boolis ah oo AMISOM ah ayaa horay usoo maray horumarka adag ee ciidamada booliska Soomaaliyeed. Haseyeeshee, howsha howlaha rayidka ah ee yar yar (oo loo fasaxay 70 shaqaale kaliya) ayaanan u dirin qaybaha gobollada si ay uga caawiso xasilinta degsiimooyinka laga soo celiyay al-Shabaab, qaar ka mid ah dhowr sano ka hor.
4. In diirada lasaaro lana hubiyo wadashaqeyn dhab ah
Dadaalada caalamiga ah ee xasilinta Soomaaliya waxay ku lug leedahay afartan gobol iyo hay’ado caalami ah. Waxaa muhiim ah in hawshooda la isku duwo oo ay ku hayaan fikradaha dhabta ah ee ku saabsan mudada dheer ee lagu guuleysto nabadda nabadda, gaar ahaan marka aysan jirin xal nabadeed oo lagu joojinayo dagaalka ka dhanka ah al-Shabaab.
Maanta, laba meelood oo ka mid ah hawlgelinta caalamiga ah waxay u taagan yihiin sida dhibaatada ah. Ugu horreyntii, waaxyaha caalamiga ah ayaa AMISOM u oggolaaday dhaqaale ahaan. Tan iyo Janaayo 2016, ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika waxay heleen gunno bil walba qiyaastii $ 800, wax ka yar $ 1,350 oo ay ka qaateen shaqaalahoodii UN. Ka gaabinta inay si ku filan u maal-galiso AMISOM – howlgal ay soo saartay Golaha Ammaanka ee QM – ayaa si xun u saamaysay niyadsamkeeda iyo waxtarkeeda.
Marka labaad, wada-hawlgalayaasha caalamiga ah waxay u baahan yihiin hab cusub oo loogu talagalay in la siiyo ciidamada ammaanka ee dibadda. Keenaya lacag iyo qalab loo gooyey hay’ad sida musuqmaasuq ah sida SNA ay mar walba halis u tahay, laakiin ma jirin wax kale oo wanaagsan oo isku dayaya in al-Shabaab laga saaro Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, hadda waa iska cadahay in tobankii sano ee la soo dhaafay dadaaladii ku saabsanaa in ka badan daraasadlayaal ajnabi ah si loo dhiso SNA ma shaqeynin. Kiiska ganacsiyada-sida-caadiga ah waa mid aan la fahmi karin. Habka ay tahay in uu qaato waxa uu weli yahay su’aal deg-deg ah oo loogu talagalay siyaasadaha wax ku oolka ah ee Soomaaliya iyo wixii ka dambeeya si ay uga jawaabaan.